Karazana vokatra: P0.9
Habe: 600 * 337.5mm
P0.9 Indoor HD Event Rental LED efijery LED mandritra ny fihaonambe P0.9 Indoor HD LED fisehoan-javatra P0.9 Rental Event Rental LED Screen ItemsParameter Pixel
P0.9 efijery rindrina LED ao anaty trano
Famolavolana kabinetra kanto
Ny famolavolana kabinetra fohy dia manadio kokoa ny lafiny aoriana amin'ny efijery miaraka amin'ny Good Heat Out.
Fikojakojana eo anoloana
Module LED, famatsiana herinaratra, karatra mpandray, karatra hub, tariby dia serivisy rehetra eo aloha.
Fanaparitahana hafanana tsara
Ny lanjan'ny kabinetra dia maivana kokoa ny 40% noho ny valizy vy nentim-paharazana, izay mitahiry vola be
Arovy ny zoro efatra amin'ny maody sy ny arimoara
Fikolokoloana eo aloha
Mampiasà vola hitazonana ny fitaovana fisotroana kapoaka ary hitsentsitra ny modely (apetraho eo an-damosin'ny mody ny takela-by
Ny kabinetra vita amin'ny alim-panariana maty dia manana tanjaka avo, milamina kokoa ary sarotra ovaina kokoa noho ny fitaovana firavaka manezioma, mba hahazoana antoka fa azo antoka ny fonosana.
Ny vokatra Nirvana Series dia manana famolavolana modely ultrathin mifehy ny hateviny amin'ny 38mm tsy misy plastika ambany, mandritra izany fotoana izany dia mahatsapa ny lanjan'ny kabinetra amin'ny 6kg. izay safidy lehibe indrindra amin'ny fanamorana.
Manohana ny fanitsiana banga hahatratrarana seam zero, ny fanitsiana ny maodely tokana dia azo ahitsy
Fifanarahana volamena 16: 9
Araka ny famolavolana ergonomika, ny tahan'ny kabinetra dia 16: 9, ary ny famaritana mahazatra ny teboka-to-point 2K / 4K / 8K dia azo aseho
Manohana HDR miaraka amin'ny famirapiratana ambany sy ny volondavenona avo lenta
Mahatalanjona ny antsipirian'ny famirapiratana ambany, ary manana fampisehoana ambaratonga volondavenona avo amin'ny 100CD
Ny fikolokoloana eo anoloana sahaza kokoa sy ny habaka voatahiry
Miorina tanteraka amin'ny rindrina
Ny hatevin'ny kabinetra: napetaka amin'ny rindrina 43mm tanteraka hamonjy toerana
Hery sy fambara tsy misy hatakalony
Hery mahery sy famantarana ho an'ny efijery mainty 0, miorina ary azo itokisana
Raha manontany tena ianao hoe inona ny fisehoana LED pixel pitch tsara dia tsy hafahafa na hafa loatra amin'ny efijery LED mahazatra. Ny hevitra iray amin'ny fisehoana LED pixel pitch tsara dia miaraka amina sehatra fanampiny sy mandroso. Anisan'izany ny fampifangaroana ny rafitra fampisehoana LED, ny rafitra fanaraha-maso famaritana avo lenta, ny rafitra mangatsiaka ary ny teknolojia teboka-fifehezana pixel. Izany rehetra izany dia ampiasaina amin'ny fanaovana sary kely LED pixel kely ho lasa mandroso sy havaozina kokoa amin'ny efijery LED; indrindra noho ny fahombiazany.
Ankoatr'izay, ireo efijery ireo dia mamela anao hametraka ny famirapiratan'ny pixel, ny loko ary ny fitoviana mifanaraka amin'ny fomba fijery atiny ilainao. Raha fintinina dia voafehinao bebe kokoa ny teboka rehefa mampiasa vola amin'ny fisehoana LED pixel pitch ianao.
Nirvana Series 16: 9 LED famaritana
zavatra Nirvana Series Nirvana Series Nirvana Series Nirvana Series
Scan Mode 1/30 Scan 1/64 Scan 1/32 Scan 1/32 Scan
Pixe Per Sq.m Pixel 1,137,777 640,000 Pixel 409.600 Pixel 284,444Pixel
Fanapahan-kevitry ny governemanta 640 * 360 480 * 270 384 * 216 320 * 180
Fomba fikojakojana Azo atolotra eo aloha
Famerenana amin'ny alàlan'ny safidy Karatra famatsiana herinaratra sy fandraisana
Haben'ny Module (W * H) 300 * 168.75mm
Haben'ny kabinetra (W * H * D) 600 * 337.5 * 38mm
Mari-pana loko 10000K ± 500 （azo ovaina
Mizana volondavenona 16bits
Kabary lanja 5.2KG / Sombiny
Famirapiratana (Nits / ㎡) 800nits
Fanjifana herinaratra antonony 100Watt / Pieces
Max Fanjifana herinaratra 200Watt / Pieces
Temperature miasa -10 ° C hatramin'ny 40 ° C
TOSIKARAT miasa 100-240Volt (50-60hz)